DEG-DEG: Xiddiga kooxda Man City ee Bernardo Silva oo la ganaaxay – Gool FM
(England) 13 Nof 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Man City Bernardo Silva ayaa ganaax culus garka loo galiyay kaddib markii uu fal cunsurinnimo ah kula kacay xiddiga ay isku kooxda yihiin ee Benjamin Mendy.
Bernardo Silva ayaa lagu ganaaxay hal kulan iyo inuu bixiyo £50,000, kaddib markii uu Twitter-ka ku cunsuriyadeeyay Benjamin Mendy.
Waxa uu Twitter-ka soo dhigay Silva bishii lasoo dhaafay labo sawir oo la isku dhejiyey oo kala ahaa Mendy oo carruur ah iyo kartuun cunug madow ah oo faruuryo casaan ah leh, taasoo xiriirka Ingiriisku ay u arkeen fal cunsurinnimo ah.
Fariimaha warbaahinta ee xiriirka bulshada leysku mariyay ayaa dhaliyay qeylo dhaan iyadoo ay inta badan dadku ay sheegayeen in Bernardo Silva uu arrintaas ku cunsuriyadeeyay dadka madowga ah, taasoo horseeday in xiriirka FA-ga ay arrintaas isaga ku ganaaxaan.
Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ayaa maanta xiddigan reer Portugal ku ganaaxay hal kulan iyo inuu bixiyo lacago.
Bayaan ka soo bxay Xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ee “FA-ga” ayaa lagu yiri:
“Bernardo Silva waxaa la ganaaxay hal kulan oo tartan Rasmi ah, waxaana sidoo kale lagu ganaaxay inuu bixiyo £50,000, waana qasab inuu dhameysto ganaaxan, kaddib markii uu qirtay inuu jabiyay sharciga FA-ga ee la yiraahdo Rule E3.
“Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Man City ayaa 22-ka bishii September 2019 isagoo isticmaalay warbaahinta xiriirka bulshada waxa uu jabiyay xeerka FA Rule E3(1), maadaama uu aflagaado ama arrin aan habooneyn oo qalqal keentay uu sameeyay, waxaana u aragnay ku xad gudub aflagaado ah sida lagu qeexay qaanuunka FA-ga ee E3(2), maadaama ay jirto tixraac ha muujiyo ama yuusan muujinin, arrinta haku saabsanaato middab ama yeeysan ku saabsanaanin anaga waxaan ilaalineynaa asalka qoomiyadaha”.